जनप्रतिनिधिहरुको जुँगाको लडाईले बेनी नगरपालिका अस्तव्यस्त बन्दै (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
जनप्रतिनिधिहरुको जुँगाको लडाईले बेनी नगरपालिका अस्तव्यस्त बन्दै (भिडियो)
१. जनप्रतिनिधिहरुको जुँगाको लडाईले बेनी नगरपालिका अस्तव्यस्त बन्दै
राजनीतिक दम्भ र बेमेलको शिकार बनेको छ बेनी नगरपालिका । स्थानीय तहहरुले पूर्व शर्त अनुरुप असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसके । तर बेनी नगरपालिकामा भने जनप्रतिनिधिबीचहरुको विवादले सुरसार पनि हुन सकेको छैन ।
नगरप्रमुख एकातिर र बाँकी जनप्रतिनिधि अर्को तिर लाग्दा वेनीका विकास निर्माणदेखि हरेक गतिविधि ठप्प छन् । नागरिक समाजका अगुवाहरुले विवाद छोडेर काममा लाग्न दबाब सिर्जना गरेपनि कुनै सुनुवाई हुन नसक्दा वेनी विकासमा नराम्ररी पछाडि धकेलिने निश्चित देखिएको छ ।
२.मृगौला रोगीहरुको संख्या बढ्दै गर्दा तनहुँको डायलासिस सेन्टरलाई भ्याई नभ्याई
नेपालमा पछिल्लो समय मृगौला रोगीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । विशेषत विदेशमा अझ भनौ मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा रोजगारी गर्न गएकाहरुमा यो समस्या बढी देखिएको छ । शहरीकरण , जीवनशैली , मधुमेह , उच्च रक्तचाप र पत्थरी लगायतका समस्याले दीर्घकालीनरुपमा मृगौलामा असर पार्दै आएको छ ।
त्यसमाथि पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पानी कम पिउने कारण पनि यो समस्या देखिएको छ । यस्तै अवस्थाको उपस्थिति देखिएको तनहुँमा अहिले दैनिक ७२ मृगौला रोगीले मृगौलाको डायलासिस गर्दै आएका छन् ।
३. लमजुङको बलिथुममा पहिलो पटक बस सेवा पुग्दा बने स्थानीयवासी हर्षित
अझै पनि नेपालका धेरै त्यस्ता गाउँठाउँहरु छन जहाँ सवारी यातायातको सुविधा पुगेको छैन । धेरै गाउँठाउँहरुमा सवारी साधन अझै घोडा, गधा नै बन्न विवश छन् । यस्तै गाउँ थियो लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका ८ स्थित बलिथुम पनि । जहाँ पहिलो पटक गत साता बस पुगेको छ । बस पुग्दा स्थानीयवासीमा देखिएको खुसी शब्दमा व्याख्या गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको थियो ।